Shariifka oo ku baaqay in meel looga soo wada jeesto Madaxweyne Farmaajo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shariifka oo ku baaqay in meel looga soo wada jeesto Madaxweyne Farmaajo
Shariifka oo ku baaqay in meel looga soo wada jeesto Madaxweyne Farmaajo
Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee dalka ayaa cambaareeyay weerarka ay Ciidamada Dowladda ku qaadeen Madaxweynihii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in dhibaatada ka dhalata weerarkaasi uu masuuliyadeeda qaadi doono Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qoraal uu soo saaray Shariif Sheekh Axmed ayaa u qornaa “Waxaan si adag u cambaareynayaa weerarada qaar ka mid ah Ciidamada Dowladdu ay ku qaadeen guryaha Madaxweynihii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Hoghaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Dhibaatada weerarkaas ka dhalata musuuliyadeeda waxaa qaadaya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Waxaan ugu baaqayaa ciidamada qaranka in aysan qaadan amarada khaldan ee lidka ku ah sharciga ciidanka iyo sharuucda kale ee dalka u degsan iyadoo aan uga digayno ciidamada in aysan ku milmin siyaasadda.
Waxaan ugu baaqeynaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday inuu joojiyo dhiigga daadanaya iyo qalalaasaha uu ka wado caasimadda, Dalkana uusan u horseedin burbur iyo qaran jab, xalkuna wuxuu jiraa in dalku doorasho aado.
Soomaaliya xal aan ahayn wadahadal iyo isqancin xilligan wax aan ahayn kama furna, haddii ciidan iyo dagaal ooganimo wax lagu helayo kuwa isaga ka xoog iyo hub badnaa ayay dadka Muqdisho barqad cad iska xureeyeen.
Shacabka Soomaaliyeed na waxaan ugu baaqayaa in loo wada istaago sidii dalkan looga badbaadin lahaa in uu dib ugu laabto meeshii adkeyd ee laga keenay, oo si wadajir ah loga hortago khatarta taliska xilligiisu dhammaaday.”
Previous articleWararkii ugu dambeeyay dagaalka Magaalada Muqdisho
Next articleC/raxmaan C/shakuur “Kaniif & Qaroole waa labada Sarkaal ee weerarka ku ah hoygayga”